WAA MAXAY MACMIILKA DIGAAGA: HALABUURKA IYO ISTICMAALKA - XOOLAHA
Qeexida iyo isticmaalka cuntada digaaga
Waqtigan xaadirka ah, borotiinka koonfureedka waxaa loo tixgeliyaa xal aan qaali ahayn oo tayo sare leh ee dhibaatada ka haysata nafaqada caalamiga ah. Soy, by iyo weyn, waa nooc ka mid ah kaydka borotiinka, cuntada iyo quudinta. Xaaladda qaybta hilibka ayaa si toos ah u saameynaysa heerka wax soo saarka soybean sida dalag calafsan. Baahida loo qabo hilibka iyo badeecadaha waa mid xasilloon, taasina waxay ka dhigeysaa in loo baahdo in la helo quudiyo borotiinka oo tayo sare leh, taas oo kicinaysa ballaarinta wax soo saarka. Dheeraad dheeraad ah ee maqaalka waxaan ka wada hadli doonaa isticmaalka cuntada soybean ah, ogow waxa ay tahay iyo waxa cabirada ay tahay in lagu daro cuntooyinka xayawaanka.
Cunto waa badeecad ka baxsan saliidaha shinnida. Ka saarista shidaalka waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo dareeraha dabiiciga ah. Ka hel natiijada ka soo baxda digirta doofaarka, taas oo saliidda hore loo soo saaro, ka dibna u samee habka qoyaan-kuleylka dheeriga ah. Iyada oo qayb ka mid ah cunnooyinka soybeedka cuntada waxaa jira amino acids, qadar badan oo borotiinka ah, fosfooraska, birta iyo kalsiyum, iyo waliba waxyaabo kale oo waxtar leh. Sida borotiinka, sonkorta waxaa loo qaybiyaa borotiinka hooseeya iyo borotiinka borotiinka sare leh marka la eego waxyaabaha ay ka kooban tahay sheygan.
Sidoo kale, badeecada waa la dubay (waxay leedahay midab madow oo u ekaan doonta qoryaha balka) iyo dhuxul (waxaa si sahlan loo buuxiyaa oo loo qaadaa).
Ma taqaanaa? Marka laga hadlayo beerashada daanjoogta, hoggaamiyayaasha maanta waa Argentina, USA iyo Brazil. Inta badan badeecadda (qiyaastii laba meelood labo) waxaa loo dhoofiyaa China.
Laylis iyo isticmaal
Cuntada Soybeerka waxaa loo tixgeliyaa walxo cayriin tayo sare leh, taas oo ah midka ugu fiican soo saarista xayawaanka digaaga ee digaaga iyo xayawaanka. Si aad u fahanto sababta sabirta soogalootigu ay aad u qiimo badan yihiin, waa ku filan in lagu falanqeeyo ka kooban. Fikradda ay ka mid tahay diyaarinta cuntada xayawaanka beeraha waxay ku saleysan tahay nuxurka cuntooyinka waaweyn ee borotiinka, dufanka caafimaadka qaba, karbohidratka, fosfooraska, fiitamiinada iyo tiro ka mid ah macdanta.
On dabeecadaha tamarta iyo quudinta ee this wax soo saari karaa la cake, taas oo sidoo kale laga helay natiijada ka mid ah processing saliidda-warshad dalagga. Labada ka mid ah alaabooyinkan waxaa ku jira saliidaha ku jira halbeegga, kaliya cuntada ay ka yartahay (ilaa 1.5%) marka la barbardhigo cuntada soybean.
Cuntada, sida hore loo soo sheegay, waxaa jira borotiin iyo fibreer badan (qiyaastii 30-42%), taas oo ka badan inta ku jirta cake. Carbohydrateska ayaa sidoo kale jira, kuwaas oo inta badan ku jira qaabka sukrose.
Baro wax kale oo cunto ah, sida loo diyaariyo quudinta digaaga, tiknoolojiyada beeraha ee masagada sii kordhaya ee cuntada, diyaarinta naas-nooca feed.
Dufanku waa asiidh aan dawakh ahayn oo aan la kaydin karin waqti dheer isla markaana si sahlan loo ogaan karo. Marka la eego, nolosha shelf ee badeecaddu waxay leedahay mudo kooban.
Waad ku mahadsan tahay cuntada, waxaad kordhin kartaa dheefshiidka nafaqada ee xayawaanka xayawaanka, hagaajinta guulaha maalin kasta, yareeyo luminta xoolaha. Iyada oo ku xiran tamarta sare iyo borotiinka ee ku jirta raashinka soybean, qiyaasaha waxqabadka sare waxaa la diyaarin karaa iyadoo aan loo isticmaalin quudin qaali ah. Kani waa bedel wanaagsan oo loogu talagalay kalluunka dhaqanka iyo lafaha.
Ma taqaanaa? Cudurka soyku wuxuu awood u leeyahay in uu jidhka ku nuugo iyo sidoo kale borotiinka xayawaanka, oo aan lagu sheegi karin borotiinada dhirta. Tusaale ahaan, borotiinka hilibka lo'da waxaa lagu nuugaa qiyaastii 90%, borotiinada soya - 80%, iyo qudaar - kaliya 50-60%.
Arjiga Cuntada Soybean
Soy waxaa lagu soo bandhigi karaa cunnooyinka ku dhawaad ​​xayawaanka beeraha. Sidoo kale, soy waxaa loo isticmaalaa si loogu diyaariyo keydka borotiinka, caanaha soy, caanaha, bur, hubka, iyo dabcan, cunto.
Xayawaanka beeraha waxay u baahan yihiin in la cuno raashin tufaax ah, oo aan soy ku jirin qaabkeeda saafiga ah. Waxyaabaha noocan oo kale ahi waxay noqon doonaan iyaga oo ah il dhammeystiran oo ah borotiinka iyo amino acids. Diyaarinta, cunada soybean waxay qaadan kartaa 5% ilaa 25%. Tusaale ahaan, qiyaasta doofaarka waxaa lagu go'aamiyaa qiyaas ahaan ilaa 500 g halkii qofba, for digaagga iyo shimbiraha kale ee beeraha - 10 g halkii qof.
Waa muhiim! Waa lagama maarmaan in si taxadar leh loola socdo xaddiga cuntada la cuno ee shimbiraha, gaar ahaan digaagga. Cuntooyinkooda waa in aysan ka badnayn 30% wax soo saarka soy, haddii kale waxay muujin doonaan shubanka, waxaana laga yaabaa inay sidoo kale horumariyaan gout.
Guryaha halista ah
Waa in la fahamsan yahay in soy dabiiciga ah uu ka kooban yahay waxyaabo sun ah oo yareyn kara heerka nafaqada ee quudinta oo markaa hoos u dhigo korodhka culeyska xayawaanka. Marka la eego, isticmaalka soy ee foomka saafi ah laguma talinayo.
Waxay ku haboontahay in ay u isticmaasho foomka cayriin ee quudinta lo'da inta lagu jiro marxaladda nuujinta. Kadibna waxaad u baahan tahay inaad dhowrto tirooyinka soo socda: 100 g oo ah digirta ayaa loo qaadaa 1 l oo caano ah. Nafaqada noocan oo kale ah waxay ka dhigeysaa bacriminta caanaha iyo tayada sare leh, iyo qiyaasta dhalidda caanuhu waxay kor u qaadi doontaa muuqaal ahaan. Xaaladaha kale, soybeerka cayriin ma aha oo kaliya inuu saameyn ku yeelan karo heerka waxsoosaarka, laakiin sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu waxyeeleeyo caafimaadka xayawaanka, kaas oo la dhammeyn karo xitaa natiijada dhimashada.
Ha quudin xayawaannada xayawaanka ah, gaar ahaan marka la isku daro HOL, sababtuna waxay ka koobantahay halbeeg, kaas oo ka hortagaya sii daaya ammonia ka yimaada HOL, taasina waxay saameyn aad u xun ku leedahay jidhka.
Waa muhiim! Waxaa si adag loo mamnuucay in ay ku quudiyaan xayawaanka suunka soybean, kaas oo lagu daboolay caaryar. Quudinta noocan oo kale ah ayaa u dhiman doonta iyaga.
Cuntada soybean waxaa lagu keydin karaa bacaha ama bacda. Qolku waa inuu ahaadaa mid qalalan, nadiif ah, oo la doorbidaa kahor jeermiska. Bacaha sheyga leh waa in aan la dhigin dhulka, laakiin sariirta gaarka ah ama daboolka.
Sidoo kale, qolka kaydinta waa in si wanaagsan loo nuugo, ma jiraan wax cayayaanka ah. Ilaalinta qorraxda iyo ilaha kale ee kulaylka waa in la siiyaa. Iyada oo ku saleysan kor-u-qaadista, waxtarka sarreeya ee raashinka digaaga ee quudinta xayawaanku waa xaqiiqo aan la fahmi karin. Lacag dheeraad ah ayaa ah qiimaha ugu hooseeya, taas oo ka dhigaysa suurtogalnimada in ku dhawaad ​​dhammaan caanaha xoolaha si loogu daro waxsoosaarkan nafaqada ee xayawaanka xoolaha iyo shimadaha beerahooda.